Mpanamboatra sy mpamatsy casting casting China. P&Q
Ny orinasa P & Q an'ny orinasa mpamono olona maty dia ao Haining, Zhejiang, Sina.
Izahay dia ISO 9001: 2015 mpanamboatra fanariana maty alimina izay manampahaizana manokana amin'ny serivisy fanariana maty ho an'ireo indostria sy orinasa manerantany.
Milina fanariana maty avy amin'ny 200 taonina ~ 800tons. Manambola hatrany amin'ny fitaovana vaovao izahay mba hiatrehana ny fanamby amin'ny fanatsarana hatrany ary hanome ny vahaolana mety indrindra amin'ny filan'ny mpanjifanay rehetra.
Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny andiany kely antonony noho ny fanandramana fanovana haingana ho fitaovana. Afaka manome vahaolana mandrakotra ny filanao malefaka izahay. Fahaiza-mitsonika hatramin'ny 2000 Kg / h. Tsy misy olana ny miasa amin'ny alloys samihafa amin'ny fotoana iray.
P&Q dia mitantana ny rojom-bidy feno vokatra mamela antsika hanome ny mpanjifanay ampahany vita tanteraka, vonona hampidirina amin'ny vokatra farany.
Hatramin'ny 2005 P&Q dia mampiditra fitaovana sy filozofia amin'ny famokarana lean mba hahazoana fanatsarana tsy tapaka ny fizotrany sy ny valiny.
Tombontsoa avy amin'ny Die Casting
Ny casting casting dia afaka mamokatra faritra vy misy endrika sarotra ary manao izany miaraka amin'ny fandeferana akaiky kokoa noho ny fizotran'ny famokarana betsaka hafa.
Ny famoahana maty dia mamokatra indrindra ny taha-pamokarana avo lenta, misy ampahany izay mila milina kely na tsy misy.
Ny famoahana ny maty dia miteraka ampahany maharitra, mateza matevina ary mandrafitra ny fahatsapana sy ny fisehoan'ny kalitao.
Ireo ampahany izay efa maty dia mahery noho ny bobongolo amin'ny tsindrona plastika, izay manome refy mitovy amin'ny refy mitovy amin'izany. Ny fananganana rindrina dia matanjaka sy maivana kokoa noho izay azo atao amin'ny fizotran'ny fanariana hafa.
Ny fanariana ny maty dia mampiseho ny fahamendrehana avo lenta ary ny famerenana ny famolavolana endrika tsy mitovy amin'ny pitsiny sy ny haavon'ny antsipiriany.
Amin'ny ankapobeny, ny famoahana maty dia miteraka fihenan'ny vidiny amin'ny dingana iray sy amin'ny dingana iray izay mila dingana famokarana maromaro. Afaka mamonjy vola ihany koa izy amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fako sy ny fako.
Matetika ny casting dia miteraka taham-pamokarana haingana na hafainganana.
Teo aloha: LED Street Light-PQSL003
Manaraka: Tsindrona plastika